के भन्छन् पतंजली सुरशाला आइडलका विजेता ? - कुराकानी - साप्ताहिक
के भन्छन् पतंजली सुरशाला आइडलका विजेता ?
कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको बालबालिकाहरुको गायनमा आधारित नेपालकै पहिलो रियालिटी शो ‘पतंजली सुरशाला आइडल जुनियर’ का विजेताहरु नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा करियर बन्ने कुराले उत्साहित भएका छन् । ग्रान्ड फिनालेमा सिन्धुपाल्चोकका आयुष केसीले पतंजली सुरशाला आइडल जुनियरको उपाधि जित्न सफल भएका छन् । प्रतियोगितामा ईटहरीका प्रितम आचार्यले दोस्रो स्थान हासिल गरेका छन् भने पाटनका स्रजल महर्जनले तेस्रो तथा पब्लिक च्वाइस एवार्ड पनि जितेका छन् । सुरशाला फाउन्डेसन तथा म्युजिक एकेडेमीको संयुक्त आयोजनामा नेपालको पहिलो बाल गायन रियालिटी शो पतंजली सुरशाला आइडल जुनियर पतंजली आयुर्वेद प्रा.लि नेपालको प्रायोजनमा आयोजना भएको हो ।
के भन्छन् विजेताहरु ?
आयुष केसी, विजेता, पतंजली सुरशाला आइडल जुनियर
सिन्धुपाल्चोकमा जन्मिएका आयुष केसी दधीकोट, भक्तपुरमा बसोबास गर्छन् । १० वर्षीय आयुष स्थानिय मोर्डन बोर्डिङ हाइयर सेकेण्डरी स्कूलमा अध्ययनरत छन् । ५ वर्षको उमेरदेखि नै संगीतमा रुची राख्न थालेका आयुषले विद्यालयमा पनि संगीतको अध्ययन गरिरहेका छन् । उनलाई विद्यालयकै संगीत प्रशिक्षक क्षितिज कुलुङले घरमै आएर पनि हरेक दिन संगीतको प्रशिक्षण दिन्छन् । पतंजली सुरशाला आइडल जुनियरमा भाग लिनु भन्दा अघि देखि नै संगीतमा तल्लिन आयुष प्राय: नारायण गोपाल तथा रामकृष्ण ढकालको गीतहरु गाइरहन्छन् । विद्यालयका अधिकांश सांस्कृतिक कार्यक्रममा नियमित सहभागिता जनाइरहने आयुष सुरशाला आइडलको उपाधि जितेपछि संगीतप्रति अझ जिम्मेवार भएर लाग्ने बताउँछन् ।
‘मैले भविष्यमा सफल गायक हुने लक्ष्य लिएको छु, कक्षा ५ मा अध्ययनरत आयुष भन्छन्—‘सुरशाला आइडलको उपाधि मेरो सांगीतिक यात्राको पहिलो खुड्किलो मात्र हो । मैले अझ धेरै अघि जानु छ ।’ पर्यटन व्यवसायी बुवा रामकृष्ण केसी तथा गृहिणी रीता कुमारी उप्रेतीका कान्छा छोरा आयुष ठूलो भएपछि आफू जस्ता स–साना बालबालिकाहरुलाई संगीतको प्रशिक्षण दिने बताउँछन् । आयुष केसीले पतंजली सुुरशाला आइडल जुनियरको विजेता हुँदै पतंजलिको तर्फबाट ५१ हजार रुपैयाँ तथा सुरशालाको तर्फबाट ५० हजार रुपैयाँसहित १ लाख १ हजार रुपैयाँ नगदसहित ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबर (गीत, म्युजिक भिडियो र सुरशाला छात्रवृति) को पुरस्कार जित्न सफल भएका छन् ।
प्रितम आचार्य, उप–विजेता, पतंजली सुरशाला आइडल जुनियर
भरखरै ९ पुगेर १० वर्षमा प्रवेश गरेका प्रितम आचार्य ईटहरीका स्थायी वासिन्दा हुन् । स्थानिय डिभाइन लभ नोबेल एकेडेमीमा कक्षा ४ मा अध्ययनरत प्रितम पनि सानै देखि संगीतमा सक्रिय भएका बालक हुन् । उनका बुवा काशीनाथ आचार्य पनि स्थानियस्तरमा चिनिएका गायक हुन् । बुवाकै प्रेरणाले प्रितम संगीतप्रति आकषर््ित भएका हुन् । सुरशाला आइडलको पूर्वाञ्चल अडिसनमा छनोट भएपछि उनी पछिल्लो सात महिना काठमाडौं–इटहरी गरिरहेका छन् । ईटहरीमै बसोबास गर्ने संगीतकर्मी बलराम समालको चेलाको रुपमा प्रितमले कम उमेरमै संगीतमा धेरै कुरा सिकेका छन् ।
सुरशालामा उप–विजेता बने पछि खुशी भएका प्रितमलाई नेपाली चलचित्रका गीतमा बाल स्वर दिन मन छ । ‘म काठमाडौंबाट टाढा छु, नेपाली चलचित्रमा गीत गाउन मन छ, प्रितम भन्छन्—‘यदि मेरो स्वर मन परेर चलचित्रमा मौका दिनु हुन्छ भने म काठमाडौंमै आएर संघर्ष गर्न तयार छु, यसका लागि बुवा–आमालाई पनि मनाउँछु ।’ प्रितमलाई भक्तराज आचार्य, नारायण गोपाल, रामकृष्ण ढकाल, शिव परियार आदि गायकका गीत कण्ठस्त छ । फुर्सद भयो कि गीत गाउन तयार हुने प्रितमलाई जागिरे बुवा तथा आमाले पनि उत्तिकै साथ दिएका छन् । प्रितम आचार्य दोस्रो स्थान हासिल गरी पतंजलिको तर्फबाट नगद ४१ हजार तथा सुरश ालाको तर्फबाट नगद ३० हजारसहित जम्मा ७१ हजार रुपैयाँ तथा २ लाख ५० हजार रुपैया बराबर (गीत, म्युजिक भिडियो र सुरशाला छात्रवृति) को पुरस्कार जितेका छन् ।
स्रजल महर्जन, भ्युअर्स च्वाइस एवार्ड तथा थर्ड रनर्स अप, सुरशाला आइडल जुनियर
पाटनका स्थायी वासिन्दा स्रजल महर्जन १२ वर्षका भए । उनी शंखमुलस्थित ज्ञान निकेटन स्कूलमा कक्षा ७ मा अध्ययनरत छन् । आफ्नै विद्यालयमा अध्यापन गराउने आमा पुजा महर्जन तथा नृत्यका प्रशिक्षक बुवा सुरज महर्जनका छोरा हुन् स्रजल । बुवा नै गीत–संगीतसंग नजिक भएकाले उनी सानैदेखि सांगीतिक वातावरणमा हुर्किए । सानै उमेरदेखि हार्मो्नियम बजाउन सिपालु स्रजल सबै विधाका गीत गाउन सक्छन् । पाटन तथा विद्यालयमै आयोजित विभिन्न सांगीतिक प्रतियोगितामा विजयी भैसकेका स्रजल सुरशाला आइडलमा पब्लिक च्वाइस एवार्डसहित तेस्रो स्थान हासिल गर्न सकेकोमा खुशी छन् ।
स्रजलले संगीतमै करियर बनाउने निर्णय गरेका छन् । ‘यो प्रतियोगिताले मेरो लागि बाटो बनाइदिएको छ, स्रजल भन्छन्—‘पढाइसंगसंगै संगीतलाई पनि अघि बढाएर भविष्यमा सफल गायक बन्ने लक्ष्य लिएको छु ।’ स्रजल महर्जनले युट्युबमा सबैभन्दा बढी दर्शक भोट पाएर ‘पब्लिक च्वाइस एवार्ड’ सहित तेस्रो स्थान हासिल गर्न सफल भए । स्रजलले पतंजलिको तर्फबाट ३१ हजार तथा सुरशालाको तर्फबाट २० हजार तथा थप १५ हजारसहित नगद ६६ हजार रुपैयाँसहित १ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबर (गीत, म्युजिक भिडियो र सुरशाला छात्रवृति) को पुरस्कार जितेका छन् ।
पतञ्जली सुरशाला आइडल जूनियरका आयोजक तथा गायक अमृत क्षेत्रीलाई पाँच प्रश्न :
एकल रुपमा राष्ट्रियस्तरको यो प्रतियोगिता आयोजना गर्ने आँट कसरी गर्नु भयो ?
आफु गायक अनि गीतसंगीतमा समर्पित भएकाले यो क्षेत्रमा विशेषगरी बालबालिकाहरुलाई संगीत क्षेत्रमा केही गर्न चाहान्छु । नेपालमा प्रतिभा भएका यति बालबालिकाहरुका छन्, उनीहरुलाई अवसर छैन, विशेमा रियालिटी शो यति धेरै छन् कि बच्चाहरुले प्रतिभा देखाउन पाउँछन् । हाम्रो नेपालमा कसैले नगरेकोले पनि मैले सुरशालाबाट यो कार्यको थालनी गरेको हो ।
कार्यक्रमको क्रममा के कस्ता समस्या भोग्नु भयो ?
कार्यक्रम अत्यन्त चुनौतीपूर्ण थियो । रियालिटि शो, त्यो पनि बालबालिकाहरुको । सबैभन्दा पहिला प्रायोजक पाउन एकदमै गाह्रो भयो । कुनै प्रायोजक बिना नै हामीले प्रारम्भ गरेका थियौं, पछि पतञ्जलीले सहयोग गर्‍यो । त्यसैगरी देशव्यापी भएकाले विभिन्न ठाउँमा गएर अडिसन गर्न, बाल सहभागिहरु धेरै हुन चाहे पनि बिना अभिभावक केही गर्न सकिंदैन । अनि उनीहरुलाई काठमाडौं बोलाएर बेलाबेलामा संगीतको प्रशिक्षणको आवश्यकता हुन्छ । त्यो सबै अभिभावकहरुलाई पनि समय म्यानेज गर्न सजिलो छैन ।
नेपाली बालबालिकाहरुको गायन प्रतिभाको कसरी मूल्यांकन गर्नु भयो ?
नेपाली बालबालिकाहरुमा यति धेरै सम्भावना छ कि उनीहरुलाई समय अनुसारको संगीतको शिक्षा र अवसरको कमि छ । धेरैजसो बालबालिकाहरु संगीतको प्रशिक्षण नै नलिएका छैनन् । उनीहरुको गायन क्षमता, प्रस्तुतीकरण र प्रगतिका आधारमा निर्णायकले मूल्यांकन गर्ने हो । हामीले सामाजिक सञ्जाल, यूट्युबलाई पनि थोरै समावेश गरेका थियौं, जसले स्वयं सहभागिहरुलाई नै सर्पोट भयो ।
नेपालमा पहिलो पटक बालबालिकाको गायनमा आधारित रियालिटी शो आयोजना गर्दाको सुखद
अनुभव के रह्यो ?
म विसुद्ध गायक हुँ । नेपालमा बालबालिकाहरु देखि युवाहरुसम्म सबैलाई नितान्त नयाँ शैलीमा व्यवहारिक संगीतको शिक्षा प्रदान गर्ने र प्रतिभा भएर पनि संगीत सिक्न नपाएका र अगाढि बढ्न नसकेकाहरुलाई सर्पोट गर्ने उदेश्यले सुरशाला म्युजिक एकेमेडी र सुरशाला फाउन्डेनस सञ्चालन गरिरहेको छु । यस्तो कार्यक्रमलाई सहयोग, साथ र हौसला पाईंदैन तर प्रतिभाको लागि आफू अपाm्नो संस्थाले नै केही गर्नु पर्ने महसुस गरेर सुरुवात गरें, जुन कठिन थियो र आज भव्य रुपले सफल भएको छ ।
आफु गायक भएर आफ्ना गीतहरु रेकर्ड गर्ने, कयौं कार्यक्रमहरु समेत रोकेर आफूले यी बालबालिकाहरुको प्रतिभा निखार्न र कार्यक्रम बनाउन व्यस्त हुनु पर्ने बाध्यता थियो जुन मैले बालबालिकाहरु र नेपाली संगीतिक क्षेत्रका लागि गरेको त्याग हो । सुरशालाले फुलाएका यी प्रतिभा भोलिको नेपाली सांगीतिक क्षेत्रका उज्वल तारा बन्नेछन् र त्यसको सुरशाला र म आफूले सुरुवात गर्न पाएको त्यो सुखद क्षण हो भने आफ्नो गायन करियरलाई समेत पछाडि राखेर यो कार्य गर्नु पर्ने, समाज र देशले यस्तो कार्यलाई सहयोग, हौसला नदिनु दु:खद कुरा हो ।
सुरशाला आइडल जुनियर–२ आयोजना हुने कुरामा कत्तिको आशावादी हुनुहन्ूछ ?
सुरशाला आइडल जुनियर दोस्रो छिट्टै हुनेछ । अझ वृहत रुपमा, अहिलेका कमि कमजोरीहरुलाई सुधार्दै सशक्त रुपले अघि बढ्ने छ ।
प्रकाशित :चैत्र २४, २०७३
टिचर आइकन रुपा लामा